Iimpawu ezipheleleyo ze-Samsung Galaxy Note 9 evuzayo ngaphambi kwengcaciso yayo | I-Androidsis
Iimpawu ezipheleleyo ze-Samsung Galaxy Qaphela i-9 evuzayo ngaphambi kokutyhila
Uluhlu olupheleleyo lweenkcukacha zobuchwephesha ze I-Samsung Galaxy Qaphela i-9, ifowuni enkulu eya kuboniswa nge-9 ka-Agasti eNew York. Oku kuyangqina kwaye kuyachasa amanye amarhe kunye nokuvuza okwaziwayo kwiiveki ezidlulileyo.
Kuyo, nto leyo eyaziwa ngokuba iinkcukacha eziprintiweyo ekucingelwa ibhokisi Russian isixhobo, iimpawu ezingundoqo zichaziwe, nto leyo ngekhe isishiyele igumbi elininzi lezimanga ukuba ziyinyani. Bazi ngakumbi!
Uluhlu olushicilelweyo, IGreen Note 9 iza nescreen se-6.4-intshi sAMOLED kwiscreen seQuadHD +. Oku, ukongeza, ine-12MP (f / 1.5-f / 2.4) + 12MP (f / 2.4) inkqubo yekhamera ngasemva ezimbini kunye netekhnoloji ye-Dual Pixel kunye nomthamo wokurekhoda weSlow Motion kwi-960fps, kunye ne-8 megapixel front shooter ene-autofocus.
Kwelinye icala, njengoko sinokubona emfanekisweni kwaye bekulindelekile, I-terminal iza ne-S-Pen stylus enolawulo olukude. Ukongeza koku, ixhotywe nge-128GB yememori yeROM -enye iinguqulelo kusafuneka ziqinisekisiwe-, izithethi zestereo, iskena se-iris, iSpain Pay, isiqinisekiso se-IP68, kunye nebhetri ye-4.000mAh enenkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo, ngokufanayo nayo iya kuxhasa ukutshaja ngokukhawuleza.
Ngokubhekisele kwiprosesa, i-RAM kunye nezinye iinkcukacha zobuchwephesha, uluhlu alukhange lubonakalise kwanto. Nangona kunjalo, i-SoC ephethe ukuhambisa iziqwenga iya kuba yi-Samsung's Exynos 9810, ekwaziyo ukufikelela kumaza aphezulu e-2.7GHz. Ngokudibeneyo, i-4 kunye ne-6GB ye-RAM iya kuphunyezwa kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo zesiphelo esinye, kwaye i-Android 8.1 Oreo iya kufumaneka njengenkqubo yokusebenza.
Fumanisa: Isibhengezo sokuqala seGalaxy Note 9 sihluziwe
Ukwazi ukuba ezi mpawu ziyinyani na, Kuya kufuneka silinde iintsuku ezimbalwa ukuboniswa kwesixhobo. Ngaloo mini siya kufumana lonke ulwazi malunga nefowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Iimpawu ezipheleleyo ze-Samsung Galaxy Qaphela i-9 evuzayo ngaphambi kokutyhila
Isamsung ikhupha uhlaziyo luka-Agasti lweGPS S8, S9 kunye neNqaku 8
U-Oppo uya kuba yinkampani yokuqala yokusizisela iselfowuni kunye neCorning Gorilla Glass 6